Post Jobs Jobs Search Scan Jobs
Inten Plus ဆိုတာ?
Intern Plus ဆိုတာ ဘွဲ့ရခါစ လူငယ်တွေ နဲ့ ဘွဲ့ရခါနီး ကျောင်းသားတွေ Internship ဆင်းဖို့တွေ၊ ပထမဆုံး experience မလိုတဲ့ Position တွေ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ Job Portal တစ်ခုပါ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလဲ မိမိတို့ လိုအပ်တဲ့ အလုပ်နေရာအတွက် အခမဲ့ ရှာဖွေနိုင်သလို လွယ်ကူတဲ့ Job Dashboard နဲ့ CV တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ့် နေရာတစ်ခုပါ။
Intern Plus ဆိုတာ ဘွဲ့ရခါစ လူငယ်တွေ နဲ့ ဘွဲ့ရခါနီး ကျောင်းသားတွေ Internship ဆင်းဖို့တွေ၊ ပထမဆုံး experience မလိုတဲ့ Position တွေ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ Job Portal တစ်ခုပါ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလဲ မိမိတို့ လိုအပ်တဲ့ အလုပ်နေရာအတွက် အခမဲ့ ရှာဖွေနိုင်သလို လွယ်ကူတဲ့ Job Dashboard နဲ့ CV တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ့် နေရာတစ်ခုပါ။ <Register လုပ်ရန်>
လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် Point System နဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် Point System နဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ <Register လုပ်ရန်>
လုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ Position တစ်ခုတင်ရင် Point ဘယ်လောက်ကုန်လဲ?
Job Post တစ်ခုတင်ရင်2Points ကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Feature Company လုပ်ရင်တော့ 8 Points ကုန်မှာဖြစ်ပြီး Feature Job ဆိုရင်တော့4Points ကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Job Post တစ်ခုတင်ရင်2Points ကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Feature Company လုပ်ရင်တော့ 8 Points ကုန်မှာဖြစ်ပြီး Feature Job ဆိုရင်တော့4Points ကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ <Register လုပ်ရန်>
လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ အခကြေးငွေ ပေးရလား ?
လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ တစ်ခါမှ ပထမဆုံးအကြိမ် Trial Version အနေနဲ့ အခမဲ့ Post (၁) ခုတင်လို့ရပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ တစ်ခါမှ ပထမဆုံးအကြိမ် Trial Version အနေနဲ့ အခမဲ့ Post (၁) ခုတင်လို့ရပါတယ်။ <Register လုပ်ရန်>
ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဘွဲ့ရတွေကော အခကြေးငွေ ပေးရလား ?
ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဘွဲ့ရ တွေဟာ အခကြေးငွေ ပေးစရာ မလိုပါဘူး Register လုပ်ပြီး တာနဲ့ Intern Plus Facebook Page ရဲ့ Message Box ကနေ Basic Package ကို နာမည်ပြောပြီး အခမဲ့ တောင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဘွဲ့ရ တွေဟာ အခကြေးငွေ ပေးစရာ မလိုပါဘူး Register လုပ်ပြီး တာနဲ့ Intern Plus Facebook Page ရဲ့ Message Box ကနေ Basic Package ကို နာမည်ပြောပြီး အခမဲ့ တောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ <Register လုပ်ရန်>
အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာ မေးဖို့ ရှိရင် ဘယ်လို ဆက်သွယ်ရမလဲ ?
Intern Plus Facebook Page ကနေ မေးမြန်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Intern Plus Facebook Page ကနေ မေးမြန်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ <Register လုပ်ရန်>
© 2018 MM Intern Team All rights reserved. Developed by Hashcode LTD